I-YIWU JEWELRY ACCESSORIES MARKET - Yunis International Trading Co, Ltd.
Janny Ding (Umphathi) +8615958903797
Bona zonke izigaba
I-Sanitizing / Disinversal Mat
Ama-Coral Fleece Mat
I-Pvc Coil Mat
I-Rubber Back Doormat
I-YIWU BITS KANYE NOKUFUNDA IZIMPENDULO ZEMarket
I-YIWU FUTIAN MARKET ISIQINISO
IZIPHUMA ZEMIHLA YIWU BELTS
IZIPHUMA ZEMIHLA YIWU HUANGYUAN
I-YIWU JEWELRY ACCESSORIES MARKET
I-YIWU SCARF NE-SHAWLS MarkET INTRODUCE
IZIPHUMA ZESIQINISO SE-YIWU STATIONERY
IMikhiqizo YOKWAKHA YIWU TOYS
I-YIWU XINGZHONG JEWELRY ACCESSORIES MarkET
I-YIWU INTERNATIONAL TRADE City
I-Yiwu jewelry Equipment Market ihlukanisa imakethe ye-Xingzhong, iJinfuyuan Jewelle Plaza, i-International Trade City. Silandele ukuze sifunde ngale Makethe Yezitolo ezintathu zeJeelley e-yiwu.
Uma kuqhathaniswa neJinfuyuan Jewelle Plaza ne-International Trade Ciry, amakhasimende athanda lezi zimakethe ezimbili ngaphezu kwemakethe yeXingzhong ngoba iyimakethe yakudala yeJeveloper Enterprise futhi ezimweni ezimbi ezungeze. Kepha kusadonsela amakhasimende amaningi ukuza lapha ukuzothenga izindawo zakhe ezindala ezenza ukuthi intela ibe eshibhile kakhulu, kuholele kumanani ashibhile kakhulu womkhiqizo.
IJinfuyuan Jewelle Plaza iyimakethe entsha uma kuqhathaniswa nezinye izimakethe ezi-2, yakhiwe eminyakeni emi-2 eyedlule, isukela kumadokodo angaba ngu-300, isilinganiso sayo sincane kakhulu kune-Yiwu International Trade City. Kepha lemakethe nayo iyisinqumo esihle, ngoba lapha insiza ihle kakhulu, ayiminyene kangako noma indala kangako ngemakethe yeXingzhong, yize isilinganiso semakethe singekho sikhulu kangako.
Imakethe yamatshe obucwebe itholakala esitezi sesithathu se-International Trade City disstrict1, E ndawo. Nansi imakethi enkulu yobucwebecwebe yamatshe anama-booths angaphezu kwama-800, ithengisa zonke izinhlobo ezahlukahlukene zezimpahla, abantu bangaphenya ezinye izinto ezifanayo lapho bethenga izinto ze-jewelry ze-jewelry. Lokhu futhi kunesizathu esenza amadoda amaningi osomabhizinisi bakwamanye amazwe afana nale makethe.